वीरगंजस्थित रहेको नारायणी वयोधा अस्पतालले दुर्बिन प्रविधीबाट दुई घण्टामै फियोक्रोमोसाइटोमाको सफल शल्यक्रिया भएको छ । वयोधा अस्पतालका शल्यचिकित्सक शल्यचिकित्सक डा. सौरभ शर्माको टोलिले दुर्बीन प्रविधीबाट एउटा दुर्लभ, जटिल र चुनौतीपूर्ण ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरेको हो ।
फियोक्रोमोसाइटोमा(एजभयअजचयmयअथतयmब) मृगौला माथि अवस्थित एड्रेनल ग्रंथी (Pheochromocytoma) मा हुने एक खाले ट्युमर हो । यस् ट्युमरले विशेष किसिमका रसायनहरु बनाउँछ जसले गर्दा रोगीको रक्तचाप असाध्यै घटबढ भई कसै कसैमा भने उच्च रक्तचापका साथै मधुमेह पनि हुन चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
वीरगंज निवासी ४० बर्षीय एक जना पुरुषको साधारण चेकजाँचको क्रममा रक्तचाप २७०/१५० पाईएको थियो । उनमा मधुमेह पनि भेटियो र थप जाँच गराउने क्रममा उनको देब्रे एड्रिनल ग्रन्थी मा ८ ह ६ से.मी. को ट्युमर भेटिददा उपचारको लागि काठमाडौं लाग्ने तयारी गरिएको थियो । वीरगंजकै वयोधामा उच्चस्तरको उपचार सम्भव हुने थाहा पाएको हुनाले वयोधामा आई थप उपचार गराउँदा उक्त बिरामी निको भएका हुन् ।
एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा. राजीव यादवले रगतको जाँच गराए पछि उनी फियोक्रोमोसाइटोमा रोगले ग्रस्त भएको हुनाले उनको रक्तचाप असाध्यै उच्च रहेको पता लागेको बताए । १ महिना लगाएर ब्लड प्रेसर र चिनी रोग नियन्त्रणमा ल्याए पछि एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. कथना बस्नेतको टिमले उनलाई बेहोश गरेको थियो । यस् रोगको अप्रेसन गर्दा ब्लड प्रेसर घरी २५०–२७० सम्म पुग्ने अनी क्षण भरमै ६०–७० सम्म झर्ने हुँदा अप्रेसन गर्दा धेरै नै सजग हुनु पर्ने डा. बस्नेतले बताए ।
केहि महिना अघि मात्रै वयोधा अस्पतालमा दुरबिन प्रविधिबाट (VATS) फोक्सो भित्रबाट फलामको टुक्रा निकालिएको थियो ।
#नारायणी वयोधा अस्पताल #parsa # शल्यचिकित्सक #Birgunj #बिरामी
सोमवार, श्रावण ३२, २०७८, ०५:०८:००
श्रावण १४, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता